छोराहरुमा सम्पत्ति नबाँडियोस् भन्ने चाहन्थे पिता, श्रीमतीकै अगाडि नाबालकलाई नदीमा फ्याँके | Rajmarga
छोराहरुमा सम्पत्ति नबाँडियोस् भन्ने चाहन्थे पिता, श्रीमतीकै अगाडि नाबालकलाई नदीमा फ्याँके
आफ्नो सम्पत्ति आफ्ना दुई छोराहरुमा नबाँडियोस् भन्नकै लागि कुनै पिताले आफ्नो नाबालक छोरालाई नदीमा फ्याँक्न सक्ला । सुन्दा निकै अनौठो लाग्ने यस्तै घटना भएको छ । एक पिताले आफ्नो सम्पत्ति नबाँडियोस् भन्नकै लागि नाबालक छोराको हत्या गरेका छन् । भारतको गुजरात राज्यको सूरत शहरका निशित पटेलले यसरी नाबालक छोराको हत्या गरेका हुन् ।
आरोपी पितालाई हिरासतमा लिएर सोधपुछ गर्दा उनले श्रीमती ब्रेना पटेकै अगाडि आफूले छोरा नीवलाई नदीमा फ्याँकेको स्वीकार गरेका छन् । प्रहरीले आरोपी पिता निशितलाई शुक्रबार अदालतमा पेश गरेको थियो । अदालतले उनलाई ५ दिनको हिरासतमा पठाएको छ । प्रहरीले ५ दिनदेखि नदीमा फ्याँकिएका नाबालकको खोजी गरिरहेको छ तर बालकको कुनै अत्तोपत्तो छैन ।
प्रहरीलाई दिएको बयानमा निशितले निकै आश्चर्यजनक कुरा गरेका छन् । निशित दोस्रो सन्तानको रुपमा छोरी चाहन्थे किनकि उनी चाहँदैनथे कि उनको सम्पत्ति दुई भाग लगाइयोस् । तर जब दोस्रो सन्तान पनि छोरा जन्मिए त्यसपछि निशित चिन्तामा डुब्न थाले । अन्ततः उनको दिमागको नीवको हत्याको योजना जन्मियो ।
पति पत्नीले साना छोरालाई नदी देखाउन भन्दै कारमा बारडोली पुगे । त्यसपछि उनीहरु बाल मन्दिर गए । त्यहाँ भीडभाड देखेपछि उनीहरु कार लिएर नेशनल हाइवे ५३ मा अगाडि बढे । बारडोलीमा नांदीडा गाउँ नजिकै मिंगोली नदीको पुलमा छोरालाई नदीको तीव्र बहाव देखाउन लिएर गए । यस क्रममा नीवलाई चिसो लागेपछि उनलाई प्लाष्टिकको बोरामा बेरे । पति पत्नी छोरालाई लिएर पुलमा गए र पुलबाट तल फ्याँकिदिए ।
Previous post: रक्सीको तालमा शिक्षिकाले आफ्नै विद्यार्थीसँग बनाइन यौन सम्बन्ध
Next post: ५५ वर्षपछि नयाँ रुपमा कार्यान्वयनमा आउँदैछन् यस्ता ऐनहरु
कसरी बालबालिकालाई मोबाइलको लत छुटाउने ?
न्यूजिल्याण्डको तट नजिकै अँध्यारोमा चम्किने गुण भएको शार्क फेला पर्‍यो
यूकेमा विक्री हुने विवादास्पद ‘कुमारीत्व परीक्षण’
आफ्नै हात काटेर पैसा कमाउन खोज्ने महिला यसरी भइन् ठग ठहर
चोरको समूहले प्रहरी प्रमुखलाई नै बन्धक बनाएपछि….
संयुक्त राष्ट्रसंघको गाडीभित्र यौनसम्पर्क, सामाजिक सञ्जालमा भिडियो भाइरल
उडिरहेको विमानमा बच्चा जन्मियो, जहाज आकस्मिक अवतरण
आधाभन्दा बढी भारतीय महिला श्रीमानको कुटाइलाई किन गलत मान्दैनन् ?
सेक्स डल ‘वेश्यालय’ले पेरिसमा यसरी मच्चायो हंगामा, ग्राहकको लाइन
तपाईलाई थाहा छ कहाँका महिला र पुरुष अग्ला, कहाँका होचा छन् ?
जापानमा डेटिङका नाममा यसरी चल्छ यौनधन्धा
यस्तो ठाउँ जहाँ एक बर्षको लागि भाडामा श्रीमती किन्न पाइन्छ